Faayilii - Miseensota paarlaama Ugaandaa wal-lolaa turan, Fulbaana 27, 2017
Kan maqaa Bobi Wine, jedhuun beekaman Robert Kya-gu-la-nyi kibxata kaleessaa ganama sagalee dho’iinsaa dhaga’uun hirribaa dammqan. Boombii harkaa sadiitu mana isaaniitti darbatame. Garuu namni miidhaan irra ga’e hin jiru.
Kya-gula-nyi-n seeram tumtoota keessaa nama sadaffaa torbanneen darban keessa manni isaanii boombiin irratti darbame.
Balaan sun jireenya koo irratti ka fuuleffate ture. Konkolaataawwan adda addaa fi namoonni garaa garaa mana koo alaa natti roorrisaa turan. naaf bilbiluu dhaan yoo umuriin prezidaantummaa murteeffame hin ka’u taanaan si ajjeesna jnana jechaa turan. halkan edaa foddaa kutaa ilmi koo hangafaa keessa turetti darbame jedhan.
Waahiloonni Kyagulanyi VOAf akka ibsanitti gaaffii fi deebiin kun geggeessamee sa’aatii xiqqoo booda miseensi paarlaamaa kun baatii darbe keessa yeroo lama poolisii dhaan qabaman.
Dubbi himaan poolisii Kaampaalaa Emiliano Kayima VOAf akka ibsanitti waa’ee haleellaa boombii Sanaa qorannaan geggeessamaa jira jedhuu dhaan hidhamuu Kyagulanyi ilaalchisee garuu waan jedhan hin qaban.
Dubbi himaan mootummaa Ofwono Opondo kaleessa ergaa tweeter maxxansaniin momitoonni boombii harkaa sodaachisuuf itti gargaaramu jechuun qeeqan.
Seera tumtoonni garee mormituu hedduun to’annaa jala oolaa fi torbanneen dhiyoo as hookkara kakaastan uummata jeeqxan jechuun yeroo hamma tokkoof hidhamaa turan.
Hiriira mormii hoogganaa momituu Ugaandaa Kizza Besiygen waamamee utuu hin geggeeffamin hafeef jecha Humnotiin nagaa eegusisasn magaalaa galma mootumma keessa heddumminaan bobba’anii jiru.
Mormitoonni tattaaffii paartii biyya bulchu kan umurii prezidaantiin qabaachuu qabu kan heerri 75 jedhu murteessu isaa mormaa jiran.
Seerri fooyyeffame sun prezidaantii waggoogta hedduuf tajaajilan Yoweri Museveni marsaa ja’affaaf hamma bara 2021tti aangoo irra akka turaniif daandii saaqa.